Uzbekistan gbatịrị mgbochi COVID-19 'Ruo mgbe ọnọdụ ga-aka mma'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Uzbekistan na -agbasa » Uzbekistan gbatịrị mgbochi COVID-19 'Ruo mgbe ọnọdụ ga-aka mma'
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ Uzbekistan na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
N'ihe dị ka July 12, Uzbekistan dere ọrịa 116,421 coronavirus na ọrịa 111,514 ma ọ bụ 96% na ọnwu 774.
Amachibidoro ịbanye ụgbọ ala Tashkent.
A na-ahapụ ụlọ ịgba egwu abalị, ebe a na-egwu mmiri, ebe egwuregwu kọmputa na ebe iri nri ọha site na elekere 08:00 ruo 20:00.
Ejighi ju 50% nke ikike niile.
Odee akwukwo nke Uzbekistan'Health Ministry, Furkat Sanaev, kwuputara taa na mgbochi mgbochi ewebata na Central Republic Republic na July 1 maka ụbọchị 12 agbatịwo ruo mgbe' Covid-19 Ọnọdụ na-akawanye mma. '
“Dịka mkpebi kọmịshọn ahụ pụrụ iche siri kwuo, kemgbe ọnwa Julaị 1, amachibidoro ịbanye na Tashkent n'ụgbọ ala, na mpaghara dum nke Republic, ịgba egwu na klọb karaoke, ụlọ nzukọ ọdọ mmiri, ebe egwuregwu kọmputa na ebe iri nri ọha na-ekwe ka ha rụọ ọrụ site na 08: 00 rue 20: 00 oge mpaghara na ọnọdụ na ha anaghị ejupụta karịa 50% nke ikike zuru ezu. Ihe mgbochi ndị a ga-adịgide ruo mgbe ọnọdụ ntiwapụ nke ọrịa ahụ ka mma, "onye ọnụ na-ekwuchitere ya kwuru.
Sanaev kwukwara na mmadụ ekwesịghị ịtụkwasị obi ozi edepụtara na netwọkụ mmekọrịta yana ụfọdụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị na e buliela mgbochi ndịiche.
O kwuru, sị, "Ọrụ mgbasa ozi nke Ministrylọ Ọrụ Ahụ Ike ga-akọ banyere nkwụsị ha ma ọ bụ mgbatị ahụ ọzọ.
Ekwuwapụtara kwarantaini ahụ Uzbekistan na Eprel 1 nke afọ gara aga na ntinye iwu nke ihe nkpuchi na nchedo mmekọrịta. Ekwuwapụtara ọchịchị ịnọpụ onwe onye na Tashkent yana mpaghara mpaghara niile, akwụsịtụrụ njikọ njem na mba niile. Emechiri ụlọ akwụkwọ ọta akara ebe a na-agbanwe ụlọ akwụkwọ na ebe mmụta.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2020, ọnọdụ ntiwapụ nke ọrịa na Uzbekistan emewo ka ọ kwụsie ike ma jiri nwayọọ nwayọọ wepụ ihe mgbochi ndị ahụ ebe ọ bụ na March nke afọ a. E weghachiri ọrụ ikuku n'ọtụtụ mba, enyere ohere nke ndị njem nleta si mba ọzọ, usoro nkewapụ onwe onye na mmachi niile na arụmọrụ nke ụlọ oriri na ọ diningụ wereụ weliri.
Kaosinadị, na mbido Mee, ọnọdụ ntiwapụ ọrịa ka njọ ọzọ na ndị ọrụ pụrụ iche bidoro imechi ihe mgbochi ahụ kemgbe July 1.
N'ihe dị ka nke July 12, Central Asia Republic na ndị bi na 34.5 nde mmadụ debara aha ọrịa 116,421 coronavirus na 111,514 ma ọ bụ 96% na-agbake na 774 na-egbu.